Beddelaan yuan In Oo shilin Soomaali
UN xogta heerka sarrifka ee 24/05/2022 11:46
yuan In Oo shilin Soomaali beddelaad. Yuan qiimaha maanta ee Oo shilin Soomaali maanta suuqa sarrifka lacagta.
1 Yuan = 86.83 Oo shilin Soomaali
U beddelo yuan illaa Oo shilin Soomaali celceliska heerka hadda la joogo. Wuxuu muujiyaa celceliska qiimaha beddelka yuan galay Oo shilin Soomaali. Kala beddelashada ilaha laga xaqiijiyey. 1 yuan wuxuu kaco 0 Oo shilin Soomaali. Qiimaha Yuan maanta qarashkiisu waa 86.83 Oo shilin Soomaali The yuan sicirka doolarka Mareykanka ayaa kor u kacay Oo shilin Soomaali by 0 boqol meelood meel barta boqolleyda.
Heerka Sarrifka Yuan In Oo shilin Soomaali
Hal bil ka hor, yuan waxaa lagu iibin karaa 84.76 Oo shilin Soomaali. Seddex bilood ka hor, yuan waxaa laga iibsan karaa 93.33 Oo shilin Soomaali. Sanad ka hor, yuan waxaa laga iibsan karaa 92.38 Oo shilin Soomaali. Halkan waxaa lagu muujiyay jaantus heerka isdhaafsiga waqtiyo kala duwan. 2.77% toddobaadki - isbeddelka heerka sarrifka yuan. Isbeddelka heerka sarrifka lacagaha yuan to Oo shilin Soomaali muddo bil ah waa 2.45%.
Heerka Sarrifka yuan (CNY) In Oo shilin Soomaali (SOS) Ku nool suuqa sarrifka Forex
Bedelaha lacagaha Yuan Oo shilin Soomaali
Yuan (CNY) In Oo shilin Soomaali (SOS)
1 yuan 86.83 Oo shilin Soomaali
5 yuan 434.15 Oo shilin Soomaali
10 yuan 868.31 Oo shilin Soomaali
25 yuan 2 170.77 Oo shilin Soomaali
50 yuan 4 341.53 Oo shilin Soomaali
100 yuan 8 683.06 Oo shilin Soomaali
250 yuan 21 707.66 Oo shilin Soomaali
500 yuan 43 415.32 Oo shilin Soomaali
Beddelaadda lacagta ayaa maanta bixisa 868.31 Oo shilin Soomaali for 10 yuan. Hadaad leedahay 2 170.77 Oo shilin Soomaali, ka dibna gudaha Soomaaliya waad iibsan kartaa 25 yuan. Beddelaadda lacagta ayaa maanta bixisa 4 341.53 Oo shilin Soomaali for 50 yuan. Maanta, 100 yuan waxaa laga iibsan karaa 8 683.06 Oo shilin Soomaali. Waad iibsan kartaa 21 707.66 Oo shilin Soomaali for 250 yuan. Beddelka lacagta maanta loogu talagalay 500 yuan ayaa bixisa 43 415.32 Oo shilin Soomaali.
Yuan In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka
Yuan In Oo shilin Soomaali maanta 24 May 2022
24.05.2022 86.172365 3.922092 ↑
23.05.2022 82.250273 -1.32499 ↓
22.05.2022 83.575263 -3.380347 ↓
21.05.2022 86.95561 0.796158 ↑
20.05.2022 86.159452 0.840177 ↑
Maanta 24 May 2022, 1 yuan = 86.172365 Oo shilin Soomaali. Yuan ilaa Oo shilin Soomaali ee 23 May 2022 - 82.250273 Oo shilin Soomaali. 22 May 2022, 1 yuan kharashyada 83.575263 Oo shilin Soomaali. Ugu badnaan yuan to Heerka Oo shilin Soomaali heerka bishii ugu dambeysay ayaa ahaa 21.05.2022. Ugu yar yuan to Heerka Oo shilin Soomaali heerka bishii ugu dambeysay ayaa ahaa 23.05.2022.
Yuan In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
Yuan iyo Oo shilin Soomaali calaamadaha lacagta iyo waddamada
Yuan calaamadda lacagta, Yuan calaamad lacag: ¥. Yuan Gobolka: PRC. Yuan lacagta code CNY. Yuan Qadaadiic: biyagaleenka.